‘यही ढङ्गले जाने हो भने संसद विघटन गरिदिए हुन्छ’ « Pathibhara Post
सरकारले त यो सब संसदले पास गरेको भनिदिन्छ । सरकारले मैले विपक्षमा भोट नहाल्नु है भनेको छ भनेर भन्दैन नि । उसले दिने जवाफ भनेको संसदमा पेश गरेको संसदले पास गरेको हो भन्छ । यो खोट बहुदलीय व्यवस्थाको हो । बहुदलीय व्यवस्थामा के हुन्छ ? जुन दलको बहुमत हुन्छ त्यसको सरकार बन्छ ।
जसको सरकार बन्छ त्यसैको सांसद धेरै हुन्छ सदनमा । सांसद बढी भएपछि आफूले पेस गरेको कुरा हुबहु पास हुन्छ । त्यसैले हामीले सचेत गराइदिएका पनि छौँ । मैले त पटक पटक समय लिएर सङ्कल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, जरुरी महत्त्वको प्रस्तावहरु लिएर सरकारलाई मनग्य भनेको छु । अब सरकारले गर्नुपर्यो । हामी विज्ञले गर्ने काम त्यही हो ।
दुइटैले भनेको कुरा त रेकर्ड छ नि ? हामीले भनेको काम सरकारले गर्यो कि गरेन भन्ने ? गरेन भने यसको दोष जनताले त बोक्ने होइन सरकारले नै हो, उसैले बोक्छ ।
रातोपाटी अनलाइनसँग गरिएको कुराकानीको सानो अंश ।
काठमाडौं । ‘संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ भनेको छु, यसमा शेरबहादुरजी र प्रचण्डजी सहमत भइसक्नुभएको छ,
काठमाडौँ, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि ‘सुरक्षा थ्रेट’ बढेको भन्दै सरकारले डीएसपीको कमाण्डमा